कोरोना संक्रमित नेपाली मुल्ला मोल्बी भारतको अस्पतालबाट फरार, नेपाल पसेको आशंका , कतै देखे प्रहरीलाई खबर गर्न आग्रह ! – Online Nepal
April 7, 2020 609
उनले धेरै जनाले कोरोना संक्रमण फैलिन सक्ने आंशका गरिएको छ । यसतर्फ सीमा क्षेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मी र अन्य अधिकारी सचेत रहनु पर्ने आवाज उठिरहेको छ । सामाजिक सञ्जालमा उनको नाम र तस्बिर पोष्ट गरेर ‘देखेमा प्रहरीलाई खबर गर्नू’ भनेर उल्लेख गरिएको छ ।उक्त भेलामा तीन हजारभन्दा बढी मुस्लिम प्रतिनिधि सहभागी भएका थिए । जसमा नेपाली २० भन्दा बढी सहभागी भएका थिए ।
Prevसुदूरपश्चिममा २५ करोडको बोइलर कुखुरा नोक्सान, ५० हजार त जि’उंदै खा-ल्टोमा पु’रेर नष्ट !
Nextअमेरिकामा कोरोना भाइरस बनाएर चीनलाई बेचेको आरोपमा डा.चाल्र्स पक्राउ
सुष्माभन्दा खतरा उनकी भाउजु, खुल्यो नन्द भाउजुको सबै पोल! यसरी लकाए सत्य (हेर्नुहोस भिडियो) (45342)